OTU ESI ABANYE NA WINDOWS DIKA ONYE NCHỊKWA - WINDOWS - 2019
Jiri akaụntụ "Nchịkwa" na Windows
Dị ka ị maara, ndị na-eso ụzọ na ndị na-eso ụzọ bụ isi ihe dị na Twitter microblogging ọrụ. Na isi nke ihe niile - ihe gbasara mmadụ. Ị na-achọta ndị enyi, na-agbaso akụkọ ha ma na-esonye ike na mkparịta ụka maka ụfọdụ isiokwu. Na nke ọzọ - a na-ahụ gị ma meghachi omume na akwụkwọ gị.
Mana otu esi etinye ndị enyi na Twitter, chọpụta ndị na-amasị gị? Ajụjụ a ka anyị ga-atụle n'ihu.
Nchọta ndị enyi Twitter
Dị ka ị maara, echiche nke "ndị enyi" na Twitter abụghịzi ihe a na-ahụ maka netwọk mmekọrịta. A na-achịkwa blọọgụ site na ngwa ngwa (microblogging) na ndị na-agụ akwụkwọ (ndị na-eso ụzọ). N'ihi ya, ịchọ na ịgbakwunye ndị enyi na Twitter na-achọta ndị ọrụ microblogging ma na-edebanye aha na mmelite ha.
Twitter na-enye ụzọ dịgasị iche iche iji chọpụta akụkọ gbasara mmasị anyị, site na aha ọchụchọ a ma ama ma kwusi na mbubata kọntaktị sitere na akwụkwọ adreesị.
Usoro 1: chọọ aha ndị mmadụ ma ọ bụ aha njirimara
Ụzọ kachasị mfe ịchọta onye anyị chọrọ na Twitter bụ iji ọchụchọ na-achọ ya.
Iji mee nke a, anyị na-abanye n'ime akaụntụ anyị site na iji isi akwụkwọ Twitter ma ọ bụ ihe iche iche ekepụtara maka njirimara onye ọrụ.
Mgbe ahụ n'ọhịa "Nyocha Twitter"nke dị na elu nke ibe ahụ, dee aha onye anyị chọrọ ma ọ bụ aha profaịlụ. Rịba ama na ị nwere ike ịchọ nke a site na aha njirimara nke microblog - aha mgbe nkịta ahụ gasịrị «@».
Ndepụta nke gụnyere akwụkwọ isii mbụ kacha mkpa maka profaịlụ arịrịọ, ị ga-ahụ ozugbo. Ọ dị na ala nke menu ndida na nsonaazụ ọchụchọ.
Ọ bụrụ na achọtaghị microblog achọrọ na ndepụta a, pịa ihe ikpeazụ dị na menu ndọpụta. "Chọta [arịrịọ] n'etiti ndị ọrụ niile".
N'ihi ya, anyị na-enweta na peeji nke nwere ihe niile nchọta nke ọchụchọ anyị.
N'ebe a ị nwere ike ịdenye aha na nri onye ọrụ ozugbo. Iji mee nke a, pịa bọtịnụ ahụ Na-agụ. Ọfọn, site na ịpị aha microblog, ị nwere ike ịga n'ihu na ya.
Usoro 2: jiri ndụmọdụ nke ọrụ ahụ
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ndị ọhụrụ ma mechie microblogging mmụọ, ị nwere ike iji ndụmọdụ nke Twitter.
N'akụkụ aka nri nke isi interface nke netwọk mmekọrịta bụ ngọngọ "Ònye ka ọ gụrụ". A na-egosipụta microblogging mgbe niile, na ogo dịgasị iche, kwekọrọ na ọdịmma gị.
Pịa na njikọ "Nwee ume", anyị ga-ahụ ọtụtụ ọhụụ ndị ọzọ na ngọngọ a. Ndị ọrụ nwere ike ịmasị mmasị nwere ike ịlele site na ịpị njikọ. "Ihe niile".
Na peeji ndị a tụrụ aro, a na-enye anyị nlezianya ndepụta nke microblogging, na-adabere na mmasị na omume anyị na netwọk mmekọrịta.
Ị nwere ike denye aha na profaịlụ ọ bụla site na listi nyere site na ịpị bọtịnụ ahụ. Na-agụ nso aha njirimara kwekọrọ.
Nzọụkwụ 3: Chọọ site adreesị ozi-e
Chọta microblog site na adreesị ozi-e ozugbo na search bar Twitter anaghị arụ ọrụ. Iji mee nke a, ịkwesịrị iji mbubata kọntaktị sitere na ọrụ ntanetị dịka Gmail, Outlook na Yandex.
Ọ na-arụ ọrụ dịka ndị a: ị na-emekọrịta ndepụta kọntaktị site na akwụkwọ adreesị nke otu ozi mail, ma Twitter na-achọpụta ndị na-enweworị ya na netwọk mmekọrịta.
Ị nwere ike iji ohere a na peeji nke Twitter kwadoro. N'ebe a, ọ dị anyị mkpa ngọngọ a kpọtụrụ aha n'elu. "Ònye ka ọ gụrụ"ma ọ bụ kama nke ahụ, akụkụ ya dị ala.
Iji gosipụta ọrụ niile nke ozi dịnụ, pịa "Jikọọ akwụkwọ adreesị ndị ọzọ".
Mgbe ahụ, anyị ga-enye akwụkwọ ikikere dị anyị mkpa, ma na-ekwenye na ịnye data nkeonwe na ọrụ ahụ (ezigbo ihe atụ bụ Outlook).
Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-enye gị ndepụta nke kọntaktị ndị nwere akaụntụ Twitter.
Họrọ microblogs anyị chọrọ ịdenye ma pịa bọtịnụ ahụ. "Gụọ ịhọrọ".
Na nke ahụ dum. Ugbu a, a na-edebanye gị na Ntanetị Twitter gị na kọntaktị gị ma nwee ike ịgbaso mmelite ha na netwọk mmekọrịta.